Kpọsaanụ Martech Zone | Martech Zone
Ndi mmadu ndi ahia ahia 50,000, ndi na-eme mkpebi, ndi okacha amara ahia, na ndi okacha amara ahia.
77.3% nke ndị ọbịa anyị na-abịa site na nsonaazụ ọchụchọ engine.
A sụgharịrị (igwe) gaa n'asụsụ 100 na 70% Bekee.
30,000 kwa ụbọchị na-eme ndị debanyere aha email.
Mkpokọta mgbasa ozi mmekọrịta na-esote ihe karịrị ndị na-eso ụzọ 50,000.
Ndị ọbịa anyị na-enyocha, na-achọpụta, ma na-amụta usoro ahịa na ahịa na-esote ha na atụmatụ ndị metụtara ya. Nchịkọta nyocha dị ka ihe kachasị mkpa:
Ọrụ Mgbasa Ozi & Marketingzụ ahịa
Sọftụwia azụmaahịa & arụpụtaghị ihe
Ọrụ SEO & SEM
.51.7mụ nwanyị XNUMX%
.48.3mụ nwoke XNUMX%
Otu dị iche iche:
Martech Zone nwere ma jikwa ya DK New Media, LLC, ụlọ ọrụ nke Douglas Karr. Ọ bụrụ na ị ga-achọ nchịkọta akụkọ nchịkọta zuru ezu, biko kpọtụrụ m.
Anyị nwekwara ike ịmepụtara gị mmemme omenala dabere na ngwaọrụ, obodo, otu na oke ụbọchị. Biko nye nkọwa ụfọdụ ka anyị na gị nwee ike kparịta nke a. Biko ejikwala fọm a maka ozi maka ozi akwụrụ ụgwọ ma ọ bụ arịrịọ backlink. A ga-ehichapụ arịrịọ gị. Anyị anaghị enye backlinking akwụ ụgwọ ọ bụla.